Ny kianja ivelany P16 dia nitari-dàlana fampisehoana China Manufacturer
Shenzhen Priva Tech Co., Ltd. [Guangdong,China] Business Type:Manufacturer Main Mark: Worldwide mpanondrana:71% - 80% Certs:ISO14001, CE, EMC, RoHS, UL Description:Lalam-pamoronana Stadium Banner,Fampisehoana Led Perimeter ivelany,Kisendran'ny Led Led Stadium ho an'ny dokambarotra
Home > Products > Fampisehoana LED Perimeter > Ny kianja ivelany P16 dia nitari-dàlana fampisehoana
Ny kianja ivelany P16 dia nitari-dàlana fampisehoana
Model No.: Prb-16
Ny fampirantiana LED Stadium dia natao manokana Ny vokatra fampisehoana LED araka ny fepetra takiana manokana amin'ny kianja, izy io dia ampiasaina amin'ny feon'ny kianja sy ny fampahalalana momba ny dokam-barotra. Iray amin'ireo endrika dokambarotra tsara indrindra izy io. Manodidina ny fampahalalana momba ny dokam-barotra izay tsy misy fanakanana mandaitra dia manarona ny toeram-panatanjahantena manontolo. Miaraka amin'ny famolavolana ara-pitaovana sy ny kabinetra dia asio vokatra tsara ny fanoherana, tsy fahampian-drano sy ny fisorohana ny afo, miaraka amin'ny saron-tava manokana sy ny endrika famolavolana bracket zariny amin'ny kabinetra, manome antoka ny fiantraikany tsara indrindra. Kianjan'i Banner Led Dis pl y efa zatra amin'ny sehatry ny baolina kitra, kianja filalaovana basikety ary toerana fanaovana fanatanjahantena hafa.
Ny kianja ivelan'ny kianja P16 dia nitarika ny efijery fisehoana an-dàlam-pivoarana avo lenta sy ny famolavolana PCB ary koa ny teknolojia famokarana avo lenta izay mahatonga ny tontolon'ny fantsom-pamokarana mitarika ambany kokoa, sary mazava kokoa ary mazava, tsy misy jiro sy jiro tsy mazava. Ny efijery Led Led Screens for Advertising dia namboarina ary novolavolaina tamin'ny famolavolana sy rano vovoka ary afaka miasa tsara amin'ny orana sy masoandro. Afaka tafangona sy esorina mora foana, izy io dia vokatra mety ho an'ny dokambarotra isan-karazany.
LED anarana anarana: P16 Led ivelany Standium fampirantiana efijery
Kilasy LED: Dip LED jiro
Haben'ny kabinetra: 1280mm (w) X1024mm (h) - namboarina ny haben'ny kabinetra
1, azo zatra ny Angle
Ny efijery nitarika kabinetra nitarika dia afaka manitsy ny zoro amin'ny vatana kabinetra (60 ° ~ 90 °) arakaraka ny zavatra takiana samihafa, avelao ny mpihaino rehetra hahita ny votoatin'ny fandaharana.
2, ampio mason-koditra malefaka sy ondana Semicircle ondana izay nandroso nanimba ilay mpilalao ary mampihena ny fiantraikany amin'ny fitarihan-doha fisehoana.
3, fahamarinan-toerana avo lenta
Ampiasao ny jiro nitarika DIP izay karazana tariby tena azo antoka ho an'ny fisehoana ivelany ivelany.Haro ny rano amin'ny IP65, mety ho marina ny tontolo iainana any ivelany. Mahomby amin'ny -20 ℃ -50 ℃ , tsy mila A / C ilaina, fitehirizana ny fametrahana sy ny fandidiana.Izaho miasa 24 ora X7day miasa. Mitohy vola hatrany hatrany anao !!
4, 4800HZHigh famelombelona ary avo volo fotsy , ataovy ny efijery LED tena zava-misy ary mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny kalitao avo lenta amin'ny fampiasana ara-barotra.
Fomba fanaraha-maso tambajotra amin'ny ort , mety ho any amin'ny seho tokana fanaraha-maso LED any amin'ny tanàna maromaro ianao ary manavao ny atiny amin'ny fotoana rehetra tianao.
Ny zoro mijery tsara miaraka amin'ny hazavana avo . Ataovy hita maso na ny masoandro aza ny efijery fampisehoana
Ny mazava dia azo adina amin'ny andro aman-alina . Amin'izay hialana amin'ny fandotoana jiro ary hamonjy ny vidin'ny herinaratra
Product Categories : Fampisehoana LED Perimeter
P10 Outdoor Perimeter no nitarika fisehoana
Ny faritry ny kianja mitafo no nitarika fampisehoana
Lalam-pamoronana Stadium Banner
Fampisehoana Led Perimeter ivelany
Kisendran'ny Led Led Stadium ho an'ny dokambarotra
Làlam-pandrefesana fangatahana Billboard
Làlam-pandaharana Flat Led